मेरो आमा पछिको सब थोक तिमी नै थियौ , हामी सबैलाई एक्लै बनाएर कसरी जान सकेउ तिमी ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मेरो आमा पछिको सब थोक तिमी नै थियौ , हामी सबैलाई एक्लै बनाएर कसरी जान सकेउ तिमी !
कस्को नजर लाग्यो मेरो माहिली मुवा हजुरलाई।आज सबै जना त छाड म छाड गर्दै हजुरलाई कसरी rip/ हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न सकेका होलान, मेरो माहिलो लाई।
कति नराम्रो शब्द सुनिएको मेरो बाबा लाई त्यस्तो लेख्दा…कति ले एकैचोटि के भयो कसरी केही उत्तर दिने शक्ति पनि छैन। किन यति धेरै गुण भएको हजुरमा अनि कोमल मन कसैको कुभलो न सोच्ने तिमी ,कसैले नराम्रो भन्यो नराम्रो व्यवहार गरे पनि ;ह्या छाड्देउ मनमा नलीने..उल्टै बिचरा/बिचरी भन्ने ,तिमीलाई केही नहुने बरु हामीलाई असह्य हुन्थ्यो।
नारीमा हुनुपर्ने गुण कति धेरै तिमीमा मा ।कति धेरै समस्या आउदा पनि नआत्तिने।।
मैले सम्बोधन पनि यसरी गर्थेकि ” तिमी भनेर “;तिमीलाई मात्र ठूलो मुटुले.. तिमी भन्न सहज हुन्थ्यो । तिमी बाहेक अरू आमाहरूलाई कहिले तिमी भन्ने आट आएन।। दैब पनि कति निष्टुरी।।
आज एक्लै पारेर किन कहा बिलिन भयौ देवी।। मेरो माॅ पछिको माइली तिमी तर आज मेरो मम्मी पनि टुहुरो बनाएर गयौ।। मेरो मम्मी को पनि आमा तिमी नै थियौ,, सबैको आमा थियौ।। हात खुट्टा भाँ’चिए’को अधुरो अपाङ्ग जस्तै बनाएर छाडेर गयौ।
तिम्रो भौतिक शरीर खोज्न म कॅ जाऊ, कहा भौतारिम ?? भनन… तिम्रो त्यो हसिलो रूप्से अनुहार हेर्न तिमीलाई सुमसुमाउन छुन कहा आउने होला देबी तिम्रो त्यो तील कोठी अनि धप्प उज्यालो वर्ण अब म अरू कसमा देखु।। तिम्रो घरको आँगनमा ;माइली मामु भन्दै छिर्थे।।
गाह्रो छ अब तिमी बिना पहिला जस्तो जिन्दगी गुजार्न तिम्रो कमीले।। म कसरी जाने होला त्यो घर जहाँ तिमी नै छैनौ त्यहाँ अब अस्तित्व नै छैन त्यहा।।
तिमी म सँगै हिँडिको त्यो अनामनगर,त्यो थापागाउँ को गल्ली गल्ली संखमुलको उकालो ओरालो जहाँ जादानि संगै लाग्थियौ।।अब त्यहाँ गाइयो भने कसरी पार गर्ने होला त्यो बाटो जहाँ जहाँ तिम्रो पहिला थियो।।।
जानि नजानी मन दुखाए होला कहिले,माफ गरिदिनु मेरो देवी मलाई मन देखि। बाबा तिमी जहाँ छ्यौ राम्रो सँग आफ्नो ख्याल गर देवी तिमी हामी सँग हास्न बोल्न छुन मात्र नपाउने हो। तिमी हामी सँगै छेउ।
परिस्थितिलाई बदल्न सकिदो रहेनछ, स्वीकार्नु नै पर्ने रहेछ देवी ।।दुनियाँ को नजरमा तिमी यो संसारमा नभय पनि ..हाम्रो लागि सधैं अमर छेउ।।
-Aparna Singh ले लेखेको यो मनै रुवाउने स्टाटस
भर्खर इराक पुगेका दुई नेपालीको मृ’त्यु